android ဖုန်းအဘို့ဘိုးလင်း 3D ဂိမ်း | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » ဘိုးလင်း 3D
ဘိုးလင်း 3D APK ကို
ဘိုးလင်း 3D ဂိမ်း
တစ်ဦးလိုလားသူကဲ့သို့သင်တို့ဘိုးလင်း Ball ကိုလှိမ့်ချလိုက်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလား? ဘိုးလင်း 3D နှင့်အတူ, သင်သည်ဤဘောလုံးဂိမ်းတစ်ခုစူပါလက်တွေ့ကျကျရင်သပ်ရှုမောဖွယ်, HD graphics ကိုဘိုးလင်း game.The ရည်မှန်းချက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: တတ်နိုင်သမျှအများအပြားတံသင်အဖြစ်ကျော် Knock ။
အဆင်းလှသော 3D ပတ်ဝန်းကျင်တွင် Set, သင်တစ်ဦးဘိုးလင်းမာစတာဖြစ်လာသို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ရောက်ရှိဖို့သင်၏မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်ဖြစ်စေ။ ဤသည်အခမဲ့ဂိမ်းဦးဆောင်ပေးသည်ဒါကြောင့်သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့ရှေ့ဘိုးလင်းပျော်စရာနာရီ!
သငျသညျဘယ်နှစ်ယောက်ဆက်တိုက်သပိတ်ရကြလိမ့်မည်နည်း သငျသညျစုံလင်သော 300 ဂိုးသွင်းနိုင်ပါသလား?
24.05 ကို MB